Econet Puts WiFi in Kombi’s
By Mumera Wisdom , 08 , May 2017
Man asks to show his Manhood to jury to prove girlfriend choked to death during oral sex
By Mumera Wisdom , 07 , May 2017
Zanu set for another Factional Tussle
Chadzamira Romps to Victory in Masvingo
Man’s Manhood gets Stuck in Ring
Harare, Zimbabwe (News of the South)-A man ..
By Correspondent , 06 , May 2017
Zimbabwean Woman Refused Asylum Suffering In UK But Not Allowed To Return Home
Asylum limbo: The woman who can’t stay ..
National HIV Testing Strategy Services Launched
By Correspondent , 05 , May 2017
Chinese Employers Colonising Zimbabweans
Harare, Zimbabwe (News of the South) - Econet Wireless is set to introduce mobile WiFi networks in kombi's, across the country allowing its customers data connectivity whilst mobile. The .. Read More →
Harare, Zimbabwe (News of the South) - A man is asking to show a murder jury his manhood to prove his girlfriend CHOKED to death during oral sex. A .. Read More →
Harare, Zimbabwe (News of the South) - Factionally ridden Zanu-PF is set to have another frictitious matter to deal with after it went ahead and included Retired Colonel Mutero Masanganise's .. Read More →
Harare, Zimbabwe (News of the South) - Former Zanu-PF Masvingo Provincial chairman Ezra Chadzamira has romped to victory in the by-elections held on Saturday according to unconfirmed interim results obtained. .. Read More →
Harare, Zimbabwe (News of the South)-A man who had his genitals stuck in a penis ring had to wait for fireman use a grinder to free him. RT reports .. Read More →
Harare, Zimbabwe (News of the South)-Popular action movie star Steven Seagal has been banned from entering Ukraine for five years after being blacklisted by the country’s authorities, according to RT .. Read More →
Asylum limbo: The woman who can't stay in Britain, but can't leave either When she applied for asylum in Britain it was refused. And when she applied to return home, .. Read More →
Godfrey Tembo Harare, Zimbabwe (News of the South) - Government through the Ministry of Health and Child Care(MoHCC) has launched a new HIV Testing Services Strategy which is expected to .. Read More →
By Beaven Dhliwayo Harare, Zimbabwe (News of the South) – The Chinese people in Zimbabwe are bringing a new form of colonization by exposing their Zimbabwean employees to harsh working .. Read More →